पुरुषले ध्यान दिनुपर्ने महिलाका १० कुरा ! – Sanchar Patrika
अब एक व्यक्तिले दुईओटा भन्दा बढी सिमकार्ड राख्न नपाउने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई एक व्यक्तिको नाममा दुईभन्दा बढी सिमकार्ड जारी नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
यद्यपि, एक व्यक्तिले फरक/फरक सेवा प्रदायकको गरी दुईओटाभन्दा बढी सिम राख्न पाउनेछ । अर्थात्, एकै व्यक्तिले नेपाल टेलिकमका दुईओटा, एनसेलका दुईओटा र स्मार्ट सेलका दुईओटासम्म सिम प्रयोग गर्न पाउनेछन् । एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीबाट भने दुई वटाभन्दा बढी सिमकार्ड लिन पाउनेछैन ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई एक व्यक्तिको नाममा दुईभन्दा बढी सिमकार्ड जारी नगर्न निर्देशन दिएको हो । नेपाल टेलिकमको हकमा भने सिडिएमएको थप एक सिम कार्ड राख्न पाउने व्यवस्था भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
स्थानीय व्यापारीले आफ्नो घरको कौसीमा फलाएको लौका
धनगढी उपमहानगरपालिका–७ क्याम्पस रोडस्थित स्थानीय व्यापारीले आफ्नो घरको कौसीमा फलाएको लौका । सधैं बजारबाट तरकारी किनेर खाँदै आएका ती व्यापारीले बन्दाबन्दी समयमा व्यापार ठप्प भइ फुर्सदमा लगाएको तरकारी अहिले घरमै फलेको खान पाउँदा एक प्रकारको आनन्द महशुस भएको उनको भनाइ छ ।
Prevप्रचण्डको आँखा छलेर ओलीले देउवासँग के गरे गोप्य सम्झौता ? यसो भन्छन देउवा
Nextसुनको भाउमा गिरावट जारी, कति छ आज ?